Iintsimbi Phantsi Kwehempe Yam – Isahluko 5 | FunDza
Iintsimbi Phantsi Kwehempe Yam - Isahluko 5
Ndihleli phantsi ebhedini, ndifixize ndafixiza. Iinyembezi zimanzisa umqamelo. Ndicinge ngobomi bam ngaphandle koLubabalo. Ubehleli
ebambe isandla sam bakundishiya abahlobo. Ndicinge ngendlela endohlwaywa ngayo ngokubanamaqhakuva. Amanye amantombazana abanamaqhakuva xa efikisa. Akekho umntu owagezelayo. Kutheni kusenzeka lento kum?
Ndiphakamise isipili esincinci ndajonga ubuso bam. Ukuba ayibobuhle obu ndibubonayo, noko bekufanele ukuba ndiyamnkelwa kuba ndingumntu. Ndizame ukuncuma, kodwa kwezintsuku andisakwazi.
Utata ufuna kwenziwe umsebenzi wokwamnkela intwaso ngoSeptemba xa kuvalwe izikolo. Ingaba ndiza kukwazi ukwenza oku? Andazi.
Ngolwesihlanu emva kwemini agaleleka amagqirha ekhaya. Ayegcwalise ikhombi. Kutsho ingoma ngelixesha aphuma emotweni ngaphandle kweheke yasekhaya. Ingoma ithetha ngethongo lam. Kubethwa amagubu, kuyaxhentswa nengoma iyatsho. Ndibukele ngoncumo izinxibo ezintle ezimbejembeje zamagqirha.
ULubabalo ume ngaphaya kwendlela, ubukele. Ndizicingele ukuba ume nje apha uzokuthatha iindaba azise esikolweni. Andikhathali. Ndizixelele loo nto. Ngalo eli ixesha baninzi abantu abangakum.
Ndivuye kanobomi xa ndibona ubhuti Ncedile.Ungumncedisi esikolweni. Kuyandivuyisa ukubakho kwakhe. Akaseli ngeempela veki ezimokolweni. Kodwa namhlanje uyarhabula emqombothini nakutywala obumhlophe. Ndikonwabele ukumbukela exhentsa ekhulule izihlangu.
Kuthwa mandiqabe ifutha ebusweni, entanyeni nasemilenzeni. Lindixelele ithwasa elikhaphe igqirha.
Ukuqala ngoku kufuneka ndilale phantsi ekhukweni, ndingasebenzisi icephe kwaye ndihlambe ngamanzi abandayo. Andiyazi ukuba ndizakuyibamba njani lemithetho ndiyinikwa apha.
Esikolweni ngoMvulo uLubabalo uzame kangangoko ukundizimela. Uzame kanobomi ukuba ndimbone xa egonana namanye amantombazana apha esikolweni. Abanye babo yayingabahlobo bam.
UBusisiwe uze kum ngebreak. Ufune ukuxhawula isandla sam. Khange ndiyikholelwe le. Inokuba izinto zizakubangcono. Usithathile isandla sam wasiqinisa kakhulu. Kodwa, ngesinye isandla ukrazule iqhosha lehempe yam. Yonke lento yenzeke ngesiquphe. Ingalo yam ishiyeka ivulekile kuvele iintsimbi zam. Ndizamile ukuziphuncula kuye. Abahlobo bakhe baze bebaleka bebiza nabanye abafundi ukuba bazokubona.
Ndime apho intliziyo yam ibethela ukuma. Amehlo agcwele iinyembezi. Andisaboni nakakuhle ngalo eli ixesha.
Ukuyeka kwakhe ingalo yam ndiwe phantsi. Isidlele sam sithe nca phantsi ngobumanzi. Ndibukele iinyawo ezininzi zibaleka.